#BudgetSpeech2018: Kuzokwenyuka i-VAT okokuqala ngqa kusukela ngo-1993 | News24
LAST UPDATED: 2019-06-19, 05:00
#BudgetSpeech2018: Kuzokwenyuka i-VAT okokuqala ngqa kusukela ngo-1993
Cape Town - Abantu baseNingizimu Afrika bazongena bajule emaphakatheni okokuqala ngqa kusukela ngo-1993 njengoba kuzokwenyuswa i-VAT.
UNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba umemezele ngoLwesithathu ukuthi izinga le-VAT lizokwenyuswa ngo-1% lisuka ku-14% liya ku-15%, kanti lokhu kusho ukuthi i-VAT kulindeleke ukuba ingenise imali elinganiselwa ku-R22.9bn.
Okunye ukudla okuyisidingo, kanjalo nophalafini kuzodlala ku-0% VAT.
Lokhu kunyuka kuyingxenye yeziphakamiso zemigomo yentela ezenziwa kwisabelomali sokuqala sikaGigaba sokuzibophezela ukwenza imali ethe xaxa engu-R36bn ngokuthi kwenyuswe intela kunyakamali ka-2018/2019.
OLUNYE UDABA: UMalusi Gigaba kuphela ozokwethula isabelomali kusasa - Buthelezi
Ukunyuswa kwe-VAT, eyenza ikota yentela eqoqwa kuleli, izoba yingxenye enkulu ye-Additional Revenue.
Kulo R36bn we-additional tax revenue, uMnyango woMgcinimafa ngoLwesithathu, uthe ukwenyuswa kwe-VAT ngo-1% kuzongenisa u-R22.9bn.
“Asikaze siyenyuse i-VAT kusukela ngo-1993,” kusho uGigaba enkulumweni yakhe.
UGigaba uthe ukudla okuyizidingo okufana nempuphu, isinkwa esinsundu, ubhontshisi owomisiwe kanye nelayisi kuzoqhubeka nokuhlala ku-0% VAT ukuze bangasindwa kakhulu labo abadlal imbuya ngothi.
Udaba oluphelele lapha.